क्या तपाईं मलाई backlinks को लागि उच्च पीआर वेबसाइटहरु को मुख्य लाभ को समझ मा मदद गर्न सक्छन्?
निस्सन्देह, यदि तपाई एसईओमा वास्तविक, मापनयोग्य प्रगतिको आनन्द लिन चाहानुहुन्छ भने, तपाइँको वेबसाइट वा ब्लगमा गुणस्तर लिङ्क प्रोफाइल निर्माण गर्नु आवश्यक छ. आजकल, त्यहाँ तीन मुख्य कारकहरू छन् जसले ब्याकलिङ्कहरूको "आदर्श" प्रोफाइल बनाउँछ - तिनीहरूको सम्बन्ध, बहुलता, र गुणस्तर. जाहिर छ, सबै गुणस्तर लिङ्क प्राकृतिक तरीका बनाइन्छ र उच्च पेजरङ्क, डोमेन प्राधिकरण, पेज प्राधिकरण, आदि संग विश्वसनीय स्रोतबाट आउँदछ।. तर यसको मतलब छ कि तपाइँले ब्याकलिङ्कहरूको लागि केवल उच्च पीआर वेबसाइटहरू रोज्नुपर्छ?
मलाई विश्वास छ कि छैन, यो छैन. किन यस्तो? केवल किनकि वास्तविक चीजहरू अलि बढी जटिल हुन्छन्. मेरा मतलब छ कि सम्भवतः ब्याकलिङ्कहरूको लागि धेरै उच्च पीआर वेबसाइटहरू तपाईंलाई कहिले पनि कहीं पनि पाउन सक्नेछैन. गंभीरतापूर्वक, हामी सजिलैसँग नयाँ PR9 वा शायद पनि PR10 ब्याकलिङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि वर्डप्रेसबाट. सबै केहि मात्र मिनेटमा पूरा गर्न सकिन्छ - र तपाईले गर्नुभयो. त्यसोभए, यस्तो ब्याकलिङ्क हुनेछ कि लाभकारी, तपाई कसरी सोच्नुहुन्छ? वास्तवमा, कुनै नयाँ राखिएको ब्याकलिङ्कलाई मान्य छैन. मेरा मतलब छ कि प्रत्येक अलग backlink लगभग निलो र शून्य हुनेछ जब सम्म एक विविध विविध लिंक प्रोफाइल को एक जैविक भाग बन्ने छ जब. यसैले म धेरै बहु स्थानहरु को साथ अलग लिंक संग लिंक बनाउन को लागि बहुतायत शर्त को शर्त को सिफारिश गर्छन, जसमा विभिन्न मेट्रिक्स को विविधता हुनु पर्छ, बेशक उनको असमान पेजरैंक अंक सहित.
तथापि, यो अझै पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि ब्याकलिङ्कहरूको लागि उच्च पीआर वेबसाइटहरू. कुरा यो कुरा हो कि Google को जस्तै प्रमुख सर्च इन्जिनहरू को तीन मुख्य कारकहरु को सेट को उपयोग गर्दै छन् (i. ई. , प्रासंगिकता, विविधता, र गुणवत्ता - PR विशेषता संग भाग मा योगदान) तपाईंको वेबसाइट को प्रोफाईल मा हरेक backlink को लागि वास्तविक वजन र वैधता को निर्धारण को लागि. ब्याकलिङ्कहरूको लागि उच्च PR वेबसाइटहरू प्रयोग गर्ने निम्न मुख्य लाभहरू विचार गर्नुहोस्. दिमागमा राख्नुहोस्, तथापि, तपाईंले उच्च-गुणस्तर र शुद्ध रूपमा प्रासंगिक सामग्री पाउनुभयो भने तपाइँ तिनीहरूलाई मात्र आनन्द लिन सक्नुहुन्छ.
उच्च पीआर बैकलिंक को मुख्य लाभ:
तपाईको वेबसाइट या ब्लग को उचित प्राधिकरण को रूप मा, प्रमुख खोज इन्जिन जस्तै Google को दृष्टिकोण आफैँ, साथै याहू र बिंग.
सम्भावित अधिक महत्वपूर्ण ट्राफिक तपाईंको वेब पेजहरुमा खींच्यो, बेशक तपाईंको शीर्ष-गुणस्तर र शुद्ध प्रासंगिक सामग्री पर्याप्त प्रयोगकर्ताहरु लाई केहि रुचिहरु लाई आकर्षित गर्न को लागी अंततः तपाईंको वेबसाइट या ब्लग को भुगतान को रूप मा आकर्षित गर्न को लागि पर्याप्त छ.
उच्च PageRank संग वेब स्रोतहरु संग लिंक अन्य प्राधिकरण स्रोतहरु द्वारा मजबूत प्राधिकरण र विश्वास एक महत्वपूर्ण सकारात्मक रैंकिंग सिग्नल को रूप मा Google द्वारा मान्यता प्राप्त गरिनेछ, यसैले तपाईंको वेबसाइट या ब्लग को लायक एक अधिक वरिष्ठ रैंकिंग स्थान SERPs.
उच्च खोज रैंकिंग स्थानले बढेको वेब ट्राफिक पम्प गर्न राम्रो सम्भावना दिन्छ, फलस्वरूप, तपाईको सम्भावित ग्राहकहरूलाई वास्तविकमा परिणत गर्दै एकै समयमा, अनलाइन खोजीमा व्यापक प्रदर्शन गर्न हरियो प्रकाश देखाउँदछ, अन्ततः परिणाम मा ठूलो बिक्री मा.
एक राम्रो सार्वजनिक जागरूकता सिर्जना गर्नुहोस्, सामान्यतया तपाईंको अनलाइन उपस्थितिमा सुधार र तपाईंको व्यवसायको अधिक प्रसिद्ध ब्रान्ड नाम योगदान Source .